တင်ပို့ - Infinite-electronic
Infinite-Electronic.hk ရေကြောင်းနည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးကမ်းလှမ်း: ငါတို့သည်သင်တို့ Fedex, DHL, UPS, TNT, EMS, သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်တတ်တဲ့အခြားလမ်းကနေတဆင့်အထုပ်များ၏ပို့ဆောင်မှုစီစဉ်ကူညီစေခြင်းငှါသင်တို့ကိုအခြို့သောတိကျသောပေးပို့နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြပါလျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Logistic ဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပါစေခြင်းငှါ client ကိုမေတ္တာရပ်ခံအဖြစ် company.We ကိုလည်းရေကြောင်းနည်းလမ်းကိုလက်ခံပါ။
shipping ကုန်ကျစရိတ်အရွယ်အစား, အလေးချိန်, အထုပ်၏ဦးတည်ရာကိုအပေါ်အခြေခံသည်။ ကျနော်တို့ FedEx နှင့် DHL နှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သင်အဆင်သင့်အမြန်စျေးနှုန်းပူဇော်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ထုပ်ပိုးလုံခြုံရေးအတွက်ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏ၏ကှကျအတှကျအာမခံမဝယ်ပါလိမ့်မယ်။
DHL / FedEx မှတဆင့် 1000,00 အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ ထက် သာ. ကြီးမြတ်အရည်အချင်းပြည့်မီအမိန့်အပေါ်အခမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေကြောင်း။ USD1000.00 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အကယ်. စုစုပေါင်းငွေပမာဏကအလေးချိန် / Size ကိုပေါ်အခြေခံပြီး DHL / FedEx ခြင်းဖြင့်ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ် USD60-110.00 add ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါလေယာဉ်တင်သင်္ဘောများသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့တင်ပို့ရောင်းချမှုနှင့် ပို. ပင်အဆင့်မြင့် features တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အွန်လိုင်းအကောင့်ပေးပါသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ပို့ကုန်မူဝါဒများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာ။ တချို့ကထုတ်ကုန် Itar ကန့်သတ်ခံရနိုငျနှင့်ပို့ကုန်ကန့်သတ်ခဲအချိန်တင်ပို့အတွက်နှောင့်နှေးစေလိမ့်မည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ပစ္စည်းများကို၏နေ့စွဲကနေ 1-2 ရက်အတွင်းပေးပို့ခြင်းစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်ကျနော်တို့ရဲ့ဂိုဒေါင်မှာရောက်လာ။
တစ်ဦး) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းစနေနေ့, တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များဖယ်ထုတ်ပြီးသောကြာနေ့မှတနင်္လာဖြစ်ကြသည်။
ခ) ။ Delivery အချိန်သင်္ဘော Method ကိုများနှင့်ဖြန့်ဝေဦးတည်ရာနေရာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွဲချက်ကိုသာအထုပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေမိမိနေရာကိုလွှမ်းမိုးသကဲ့သို့တာဝန်များကို, အခွန်နှင့်အခြားအခကြေးငွေ, လက်ခံသူ၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှကုန်ကျစရိတ်ကိုခန့်မှန်းရန်, သင့်နိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်ရုံးနှင့်စစ်ဆေးပါ။
ဤတွင်သင့်ရဲ့ရည်ညွှန်းအဘို့သင့် destination သည်, ငါတို့၏ဂိုဒေါင်ထဲကနေအချိန်စားပွဲပေါ်မှာကယ်နှုတ်တော်မူသည်။
DHL 2-4 နေ့ရက်များ 3-4 နေ့ရက်များ 3-5 နေ့ရက်များ 3-6 နေ့ရက်များ 3-5 နေ့ရက်များ 4-6 နေ့ရက်များ
FedEx အိုင်ပီ 2-4 နေ့ရက်များ 3-4 နေ့ရက်များ 4-5 နေ့ရက်များ 3-6 နေ့ရက်များ 4-6 နေ့ရက်များ 4-6 နေ့ရက်များ
* သင်္ဘောများနှင့်ပေးပို့ကြိမ်သောကြာနေ့မှတနင်္လာကနေရက်ပေါင်းအလုပ်လုပ်အတွက်တွက်ချက်နေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောခရစ္စမတ်အဖြစ်အဓိကရုံးပိတ်ရက်၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့အပိုပို့ဆောင်မှုအချိန်ကိုခွင့်ပြုပေးပါ။ သူတို့အားအထူးအခါသမယစဉ်အတွင်းငါတို့သည်သင်တို့ဖြစ်နိုင်ချေနှောင့်နှေးသတိပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကြောင့်မူဝါဒမှတင်ပို့လို့မရဘူးအောက်ပါနိုင်ငံများ: အာဖဂန်နစ္စတန်, ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ, Cote d'Ivoire ၏သမ္မတနိုင်ငံ, ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ, အီရစ်ထရီးယား၏ဓနသဟာယ, လက်ဘနွန်၏သမ္မတနိုင်ငံ, လိုင်ဘေးရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ, အဆိုပါဆိုမာလီယာဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, ဆူဒန်၏သမ္မတနိုင်ငံ။